လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး | USAHello | USAHello
လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာဆက်ဆံရေးခြုံငုံကျန်းမာရေးဖို့အရေးကြီးတယ်များမှာ. လိင်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်ထိုကဲ့သို့သောလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုရှောင်ရှားအဖြစ်အကြောင်းအရာများဖုံးလွှမ်း, ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်း, နှင့်ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေး.
လိင်ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သငျသညျလိင်သို့မဟုတ်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးအကြောင်းလူစိမ်းစကားပြောလက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်နေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကနေမဝင်စေခြင်းငှါ. သို့သော်, USA တွင်, သင်သည်သင်၏အဓိကဆရာဝန်စကားပြောနိုင်ပါတယ် (သင့်ရဲ့ PCP) သင်ရှိသည်ဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်.. သူတို့သည်သင့်ကိုကူညီနိုငျ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကကူညီနိုင်သူကနျြးမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏အခြားကြင်နာအကြံပြုနိုင်ပါတယ်.
စီစဉ်ထားသည့်မိဘ တိုင်းပြည်အနှံ့ကလူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးတိုးတက်အောင်ထံအပ်နှံကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျစီစဉ်ထားမိဘတိုင်းပြည်အနှံ့နေသောအများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစင်တာများတဦးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. အဲဒီမှာ, သင်သည်မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး-related မေးခွန်းများကိုအကြောင်းကိုဆေးပညာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အတူစကားပွောနိုငျ. သင်တို့သည်လည်းအမြားအပွားနှငျ့ပတျသကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးရန်ကသူတို့ရဲ့ website သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများ.
အဲလစ်မေးပါ Go လူတွေကျန်းမာရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုအတွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးအပါအဝင်. အဟောငျးအဖြေကိုစုဆောင်းထုတ်ဝေနေကြ, ဒါကြောင့်သင်အတိတ်မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကတဆင့်ဖတ်နိုင်. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်.
အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးထားရှိခြင်းသည်, ထိုကဲ့သို့သောခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးတစ်အဖြစ်, သင်၏အသက်တာသို့ပျော်ရွှင်မှုကိုအများကြီးယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးကဆက်ဆံရေးဟာခက်ခဲကြိမ်အတွင်းခွန်အားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၏ရင်းမြစ်နိုင်ပါတယ်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြိမ်၌သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်မှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်.
လိင်ပညာပေးအရင်းအမြစ်စင်တာမှာ, သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် မိတ်ဖက်များအကြားဆက်ဆံရေး. စီစဉ်ထားသည့်မိဘကိုလည်းရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ယင်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ် ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး.
တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးနာကျင်ရတဲ့အခါ, ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစား, မိဘသို့မဟုတ်ကလေးက, သူတို့မိသားစုအတွက်သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦး, ထို "အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏။ "
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါသည်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု, သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး. အဆိုပါ အမျိုးသားအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု Hotline website ကသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်အလွဲသုံးစားမှုခံစားနေရပြီးမည်အကြောင်းပြောပါတယ်:
စော်ကား, သိက္ခာသို့မဟုတ်ထား-down အတူသင်တို့ shaming
သင်မြင်သောသူထိန်းချုပ်ခြင်း, မင်းဘယ်သွားတာလဲ, ဒါမှမဟုတ်သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို
သငျသညျကျန်းမာဆက်ဆံရေး၌မဖြစ်ကြပြီးသင်သည်သူတို့၏မိတ်ဖက်သူတို့ကိုနာကျင်နေသည်ထင်တဲ့သူမိတ်ဆွေများကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့လျှင်, ရရှိနိုင်ပါကအကူအညီလည်းမရှိ. သင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးထိခိုက်ခံရလျှင်, သို့မဟုတ်ထိခိုက်ခံတစ်ဦးကိုချက်ချင်းအန္တရာယ်မှာ, သငျသညျရဲခေါ်နိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအမိုးအကာသင်တစ်ဦးကြမ်းတမ်းဖက်စွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လျှင်သင်ယာယီပြောင်းရွှေ့နိုင်မည့်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့နိုင်ရန်အတွက်လျင်မြန်စွာသင့်အိမ်ထဲမှထွက်ရဖို့ရှိပါက, တစ်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအမိုးအကာသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦး option ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ,. တစ်အမိုးအကာ Find သူတို့အားကြုံနေရအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်.
အဆိုပါ hotline Call
1-800-799-7233 ၏ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု Hotline. ဖုန်းနံပါတ် operated ဖြစ်ပါတယ် 24 နာရီတစ်ရက်. သငျသညျအကူညီများအတွက် hotline ခေါ်နိုင်ပါတယ်.
STDs တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုဟုခေါ်ကြသည် (အက်စ်တီအိုင်). သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှောက်သွားရောဂါကူးစက်မှုများမှာ. ဘေးကင်းလုံခြုံလိင်လေ့ကျင့်, ကွန်ဒုံးသုံးပြီးအပါအဝင်, သင်တစ်ဦး STD စာချုပ်ချုပ်သင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင် STD ရှိစေခြင်းငှါစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, သငျသညျစမျးသပျရနိုင်အောင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူသငျသညျပွောဆိုသေချာအောင်.
USA တွင်အသုံးအများဆုံး STDs သုံးခုရှိပါတယ်:
HPV ပိုး (လူ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ)
စီစဉ်ထားသည့်မိဘ ဤအများနှင့်အခြား STDs အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်. မှာ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ HIV နှင့်အသည်းရောင်ဝန်ဆောင်မှု, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအက်စ်တီအိုင်အကြောင်းကိုအရင်းအမြစ်များကိုရှာတှေ့နိုငျ, အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဘာသာပြန်ထားသော.
သူတို့ကလေးတွေရှိတဲ့အခါထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့လိုခငျြတဲ့သူလိင်တက်ကြွအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးနိုင်သည် (ထို့အပြင်ဓတေားကိုခေါ်) ကိုယ်ဝန်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်. သင်သည်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအချက်များများစွာအပေါ်မူတည်စခွေငျးငှါအဘို့အညာဘက်ကိုအဘယျသို့မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု option တစ်ခုဖြစ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အဖြစ်, သင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း, သငျတို့သအနာဂတျမှာကလေးများရှိသည်ဖို့လိုခငျြဖြစ်စေမ.
မိန်းမတို့အဘို့မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးလာ, တစ်ဦးဆေးလုံးအပါအဝင်, ဆေးထိုး, ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့ device ကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဖြည့်စွက်နိုင်ကာ IUD ကိုခေါ်. လူတို့သညျအဘို့အမွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်မှုထိုကဲ့သို့သောကွန်ဒုံးအဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးလာ, abstinence, သို့မဟုတ် vasectomy. သင့်ရဲ့အကြောင်းပိုမို Read ကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု options များ.
သငျသညျမွေးဖွားထိန်းချုပ်စိတ်ဝင်စားလျှင်, သင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့သင့်ဆရာဝန်နှင့်စကားပြောသင့်တယ်. သင့်ဆရာဝန်အကူအညီပူဇော်နိုင်ခြင်းသည်ဆိုပါက, သင်အဘို့အညာဘက်ကိုမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု option ကိုအကြောင်းကိုအရည်အချင်းပြည့်ဆရာဝန်များနှင့်သူနာပြုများထံမှအကူအညီရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစင်တာရှာ. သင်လုပ်နိုင်သည် FindHello အပေါ်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးစင်တာကိုရှာဖွေ. သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် တစ်ဦးကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဆေးခန်းနှင့်အခြားမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုန်ဆောင်မှုများအတွက်ရှာဖွေရေး. နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် စီစဉ်ထားသည့်မိဘဆေးခန်း သငျသညျအနီး.